Shiinaha Usb-C hub-CH06B warshad iyo soosaarayaasha | Kooxda Brocade
▪ 4K HDMI Adapter Video: Kuu ogolaanayaa inaad muraayad ka dhigato ama aad ku dheereysato shaashadda laptop-kaaga Max 4K UHD 3840 × 2160 @ 30Hz. Fiiro gaar ah: USB C dekedda kombuyuutarkaagu wuxuu u baahan yahay awoodda wax soo saarka fiidiyowga.
▪ SD / TF Card Reader: Xawaaraha ugu badan ee akhristaha kaarka waa 480Mbps. Kaararka SD & TF waa la isla aqrin karaa. Awoodda ugu badan ilaa kaararka 2TB. La jaan qaadi kara 6 Kaarka Xusuusta ee kala duwan: SD Card / SDHC / SDXC / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC.
▪ 5Gbps Gudbinta Xogta: 3-xawaare sare oo USB-A 3.0 ah oo awood u leh 5Gb / s xawaaraha wareejinta ee wareejinta xogta degdega ah, taasoo u oggolaanaysa isku xirka aalado badan oo USB ah sida U disk, Portable SSD, keyboard, mouse, iwm.
Saddex xawaare oo USB 3.0 ah oo wareejinta xogta xawaareysa illaa 5Gbps. Kordhi shaashaddaada dekedda HDMI-ga HDTV, kormeere ama borojektar. Taageer wax soo saarka HDMI illaa 4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) xallinta
Tan iyo markii la aasaasay shirkadeena, waxaan ogaanay muhiimadda ay leedahay bixinta alaab tayo wanaagsan leh iyo adeegyada ugu fiican ka hor iibka iyo iibka kadib.
Dhibaatooyinka ugu badan ee u dhexeeya alaab-qeybiyeyaasha adduunka iyo macaamiisha waxaa sabab u ah wada-xiriirka liita. Dhaqan ahaan, alaab-qeybiyeyaasha way diidi karaan inay wax ka weydiiyaan waxyaabaha aysan fahmin. Brocade waxay jajabisaa caqabadahaas si loo hubiyo inaad hesho waxaad rabto heer aad filayso, markaad rabto.
Hore: USB-C hub-CH06A
Xiga: USB-C hub-CH07A
3 * USB3.0 Ilaa 5Gbps
1 * TD Ilaa 90MB / s
1 * SD Ilaa 90MB / s
Midabada cawl qalin ama midab kale oo xulasho ah
Heerkulka la adeegsan karo -40 ° C ~ 60 ° C